20 Ukucheba iinwele ebusweni beOval - Ubuhle
Ukuhla Ukusinda Ubuhle Bomtshato Imikhwa Kwiindaba Iindlela Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Uhlobo Lweceleb Uphononongo Lweemovie Ukomelela Uthando Lwezesondo
Ezona zinwele zingama-20 ziHambisayo ziBuso obu-Oval
Masiqale ngeendaba ezimnandi: Ukuba unobume be-oval face (oko kukuthi, ububanzi bubanzi ngokude), unolwandle lokukhetha xa kuziwa ekukhetheni iinwele ezifanelekileyo. Kungenxa yokuba iimpawu zakho ze-oh-so-symmetrical zikhangeleka kakuhle nangasiphi na isitayile. Ngokukrakra-ziqwalasele njengenhlanhla. Abanye bethu bayaphikisana neentloko ezintlanu (lelo libunzi le-XL, khawufan 'ucinge) kunye nezidlele ze-chipmunk ezikholelwa iminyaka yethu.
Okwangoku, nokuba ubunjani ubuso bakho, siyaqonda ukuba kunokuba nzima kangakanani ukukhetha ukuba yeyiphi into ofuna ukuyibophelela kuyo (ngakumbi xa umhlaba uyimbatyisi yakho). Kulapho thina — kunye nobuso obudumileyo eninokubabona — singena. Ukunikezela ngezona zinwele zilungileyo zingama-20 zobuso obu-oval.
Ezinxulumene: Eyona ndawo yokucheba iinwele ebusweni bakho
Ifoto nguSteve Granitz / Getty Izithombe
Yithathe kumfazi owaphule irekhodi lehlabathi lomntu okhawulezayo ukufikelela kwisigidi sabalandeli kwi-Instagram: Akukho nto iphosakeleyo ngokwamkela ukusayina. Imilenze emide kaJennifer yokutshayela kulula ukuyibhala kunye nokuma ubuso bakhe kakuhle macala omabini.
Ezinxulumene: I-Celebeauty Hlala-Phantsi: Umbala kaJennifer Aniston uthi sisebenzisa iimveliso zeenwele ezingalunganga
Ifoto nguAxelle Bauer Griffin / Getty Izithombe
2. Amaza amahlombe
Iilobhu (ii-bobs ezinde) ngokuqinisekileyo zezona zitayile zibabazekayo ukuzama-ngakumbi xa zidityaniswe nokukhululeka, ukuthululwa okubunjiweyo njengoko kubonwe kuJulia apha. Inxalenye yeziko iyabandisa ubuso bakho, ngelixa ivolumu eyongeziweyo evela kumaza ikhupha i-cheekbones yakho, yenza ulungelelwaniso oluhle ngokubanzi.
Ezinxulumene: UJulia Roberts kwaye ndiyayithanda i-Cream efanayo yesandla
UStefanie Keenan / Getty Izithombe
3. Umphetho opheleleyo
Iseti ye-bangs blunt isebenza kakuhle ngobume bobuso obu-oval (ngakumbi ukuba unobunzi olukhulu). Yenza ubungqongqo babo ngokwezifiso ukuze uhambelane nobume bakho, kodwa qiniseka ukuba ubude buhlala okanye bungaphantsi kwamashiya akho ngenxa yesiphumo esincomekayo.
Ezinxulumene: I-10 yeeBangs eziBalaseleyo zeXesha lonke
Ifoto nguJamie McCarthy / Getty Izithombe
Ifana ne-Julia's tousled lob ngentla, le cut is a touch sassier enkosi kubude bayo obufutshane kodwa ngokulinganayo uyancoma kubuso obunemilo embhoxo. Ngamaleko afihlakeleyo kuyo yonke intshukumo eyongeziweyo kunye nokuphela kokunqanda, oku kusikwa kwe-shag okupholileyo lukhetho olukhulu kubafazi abanamaza endalo.
Ifoto nguTibrina Hobson / Getty Izithombe
5. UPixie osecaleni
Uloyiko oluqhelekileyo kwabasetyhini abacinga nge-pixie cut kukuba iyakwenza ubuso babo bubonakale bujikeleze kakhulu (okuthi, ngendlela, bubuxoki ngokupheleleyo-jonga uGinnifer Goodwin). Kubuso bethu obume nge-oval, i-pixie cut yindlela eqinisekileyo yomlilo yokubonisa ubuso bakho kakuhle. Kwaye kulula ukuba nesimbo-ngakumbi xa ushiya ubude ngaphezulu njengoCharlize apha.
Ezinxulumene: 5 Ukucheba iinwele ukuzama ukuba unobuso obujikelezileyo
I-Bauer-Griffin / imifanekiso kaFetty
6. IPixie ecoliweyo
Okanye ungaya mfutshane kwaye ugcine umthamo othile ngaphezulu kwesiphumo esandisiweyo njengeLupita apha. Ingcebiso: Oku kunqunqwe kakhulu kumanenekazi amancinci, njengoko ubude obufutshane butsalela amehlo akho phezulu (kwaye ungabinobunzima kwisakhelo esincinci).
Ifoto nguDimitrios Kambouris / Getty Izithombe
7. Iicurls eziPolishiwe
Yokusikwa kweklasikhi kokubini kugcinwa okuncinci kwaye kulula ukuba nesitayile ekhaya, gcina ubude bungaphantsi kweekhola kodwa ngaphezulu kwesifuba. Sebenzisa i-barreled barling bar curling iron (singacebisa i-1.25 ukuya kwi-intshi ye-1.5 intshi ngokuxhomekeka kubungakanani beenwele zakho), yongeza ii-curls ezikhululekileyo kubude obude kunye nasekupheleni.
Ifoto nguJeff Spicer / Getty Izithombe
8. Ingqele emhlophe
Idibene nenxalenye yeziko kunye nokuma nje ngezantsi komhlathi wakho ukuze uncedise ubume bakho bethambo obungenakulinganiswa, ewe. Ukhetho lokufaka omabini amacala ngasemva kweendlebe zakho ukuqhubeka nokuvula ubuso bakho (kunye nokugcina iinwele zakho zingabikho).
Anthony Ghnassia / Getty Izithombe
9.Lob kunye ne-Side-Bangs
Thatha iphepha elivela kwincwadi kaJulianne kwaye uzame ixesha elide, elisecaleni. Khetha icala elinye (uyazi, elo uhlala ujonge kwikhamera xa uthatha iifoto) kwaye isitayile sakho usike ii-bangs ezinde kumanqanaba okutshayela ukuze ukhulise umhlathi wakho.
Ezinxulumene: Izinwele ezi-8 ezithatha iminyaka eli-10
Ifoto nguPascal Le Segretain / Getty Izithombe
10. Amaza amade
Nalu olunye usiko olungasokuze luphume kwisitayile: Amade, amaza agudisiweyo anezinto ezithambileyo ezijikeleze ubuso (aka nguJessica Alba). Iic curls ezikhululekileyo zithambisa amanqaku kwaye kulula ukuzenza kunokuba ucinga. Lungiselela imicu yakho ngesitshizi sokujiya kwiingcambu kunye nokomisa okomileyo. Emva koko, songa iinxalenye ezinkulu zeenwele ezijikeleze isinyithi esigobileyo kwaye vumela ii-curls zakho zipholile okwemizuzu embalwa ngaphambi kokuba uzihlambe ugqibe.
Ifoto nguTommaso Drown / Getty Izithombe
11. UBanged Bob
UZooey Deschanel akangomntu ongaziwayo kwii-bangs. Ngapha koko, sinobuganga bokuba ngomnye wabantu abadumileyo abanoxanduva lokwazisa umphetho opheleleyo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Nokuba kunxitywe ii-curls ezinde, ezikhululekileyo (kuye Iintsuku ezingama-500 zehlobo Jonga) okanye i-bob kunye ne-bob ecekeceke, ii-bangs zakhe zihlala zingatshintshi ngeziphelo ezi-tapered kunye nobude bokukhangela okuhlala kugcwalisa ubuso bakhe obu-oval. Ingcebiso: Ngomphetho ongakhange ujonge ukujija ngokugqithileyo, i-bangs ezomileyo usebenzisa ibrashi yesimbo (ungaze ujikeleze) kwaye uhambise iinwele kwelinye icala ziye kwelinye zide zome ngokupheleleyo.
Ezinxulumene: Ngaba Ufanele Ufumane I-Bangs?
Ifoto nguNeil Mockford / Getty Izithombe
12. IPixie esecaleni
Kunzima ukucinga ukuba uKaty unenwele ezinde ezimnyama kweli nqanaba kuba ipikethi yakhe yeplatinam ifanelana neempawu zakhe kakuhle. Ngenxalenye yecala elinzulu, ezinye iziqwenga ezinde kumacala aphezulu nangaphezulu, oku kunqumle ngokugqibeleleyo ubuso be-oval kwaye kongeza ivolumu kwimigca ethe nkqo. Yonke into oyifunayo yipomade encinci okanye isitayile esithandwayo sokugcina iipali zipholile.
Ezinxulumene: I-10 yePixie yokucheba iinwele ezakwenza ukuba ufune ukusika, Qhawula
Ifoto nguRaymond Hall / Getty Izithombe
13. IPixie ekhulile
Kwaye xa umphezulu uqala ukuba mde, shayela iinwele zakho kwelinye icala njengoJada apha, ngelixa utshintshela kwisitayile sakho esilandelayo. (Okanye ungabunyikimisa obu bude ngokungenammiselo kuba awupholanga.) Igama kwizilumko: Uyakufuna ukugcina amacala akho kunye nomva umfutshane xa ukhulisa izinto okanye izinto zinokukhawuleza ziye kwindawo ye-mullet.
Ezinxulumene: Ungayikhulisa njani iPixie (ngoBabalo)
Ifoto nguRoy Rochlin / Getty Izithombe
14. UWavy Bob
Ukuba u yenza isigqibo sokukhula kwe-pixie cut, singacebisa ukuzama i-wavy bob elandelayo. Ubunxibe, ulwandle olunolwazelelelo lubonelela ngokufihla okukhulu kwiziphelo ezingalinganiyo (ezingenakuphepheka xa uphakathi kwezitayile). Ukufumana ukujonga okufanayo ekhaya, inkungu yokutshiza okubhaliweyo kwimitya emanzi kwaye uyikroboze ukuze udibanise amaza endalo; ukuba uneenwele ezithe nkqo, sebenzisa i-flatiron ukongeza ukugoba lonke.
UPatrick McMullan / Getty Izithombe
15. I-Lob-Skimming Lobs
Nantsi enye (sleek) iteration ye-lob eyaziwayo. Thatha umkhondo ku-Emma kwaye ungeze ixesha elide, elidibeneyo kwelinye icala ukuthambisa amanqaku akho. Ekhaya, qiniseka ukuba uqhuba i-flatiron ngaphezulu kwemicu yakho (sifunga nge-T3 SinglePass Luxe 1 '' ye-Ionic Straightening Flat Iron) kwaye sisebenzise i-serum ekhanyayo kubude obuphakathi kwaye iphele ngokuqaqamba. Ingcebiso: Massage i-serum ezandleni zakho kuqala, ngaphambi kokuyifaka ezinweleni zakho ukulawula isixa esisetyenzisiweyo.
Ezinxulumene: Iinwele ezingama-32 ezilungileyo zeenwele zamagxa
Ifoto nguGary Gershoff / Getty Izithombe
16. Shag omde
Okanye a kakhulu ukusikwa kwe-shag ende, njengoko kubonisiwe nguJessica Biel apha. Ngamaqhekeza amade abetha iincopho zamathambo akho macala omabini, oku kunqunyulwa kuvuleka njengeseti yeedrapes ezifihla ubuso bakho ngaphandle kokungena (kwimeko apho iseti epheleleyo yee-bangs ayisiyo indebe yakho yeti).
Ifoto nguGabe Ginsberg / Getty Izithombe
17. Phakathi kweShag
Kuyafana nokusikwa kukaJessica apha ngasentla, kodwa nge-bang enzima kancinci macala kunye nee-intshi ezimbalwa ezimfutshane. Ingcebiso: Yongeza umxube wezinto eziqaqambileyo ezijikeleze ubuso bakho ukuze ukhanye kunye nezibane eziphantsi kuyo yonke le nto ukuze wenze ubungakanani.
Ifoto nguKevin Mazur / Getty Izithombe
18. I-Angled Lob
Uyakhumbula xa sasisithi ilob yeyona ndawo isincomayo nakubani na? Inqaku lencopho: Bubude obukhulu bamanenekazi anee-curls zendalo kuba ikunika ubunzima obaneleyo bokugcina iinwele zakho zingakhukhumali (kodwa hayi kangako kangangokuba zirhuqa iiringi zakho). Ingcebiso: Ukuba awunayo, fumana isasazisi sokuyalela ukuhamba komoya wesomisi sakho ukuze ukhawulezise isitayile ngaphandle kokuphazamisa iinwele zakho. Ukugqiba nge-misting elula yokukhanya.
Ifoto nguPresley Ann / Getty Izithombe
19. Iintsiba Shag
Dibana nomhla wale mihla uthathe isithsaba sodumo uFarrah Fawcett. Nge-bang-swept bang (ekulula ukuyikhula) kunye namanqwanqwa aneentsiba kulo lonke, umahluko omkhulu kwezi ndlela zimbini ulele kuburhabaxa-obuyi-beachier kunye ne-looser ngoku, engaphantsi egobileyo kwaye ejijwe ngokugqibeleleyo njengoko ibikade injalo.
UJackson Lee / Getty Izithombe
20. Shaggy Lob
Kwaye asinakuthetha nge-shag ngaphandle kokukhankanya u-Alexa Chung, intombazana yase-Bhritane 'intle kakhulu ngomntwana wepowusta yokusikwa kwayo. Yambethe iseti yamakhethini e-bangs kwaye yachetywa kubude be-collarbone-skimming, ukujonga kuyinxalenye ezilinganayo ezi-edgy kwaye ezingenamsebenzi. Ukufumana i-Alexa's tousled texture ekhaya, ufuna nje ukutshiza ityuwa yolwandle kunye ne-flatiron yokongeza ukugoba okuthe kratya (ngakumbi ukuba iinwele zakho zihlala ziwa kwicala elichanekileyo).
Kwaye inqaku lokugqibela elinokuphinda ukuphinda: Xa ufaka isitayile esipheleleyo, soloko usebenzisa ibrashi yesimbo sokubamba ngobunono usebenze iinwele zakho ngapha nangapha de zome. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ufumana amakhethini e-chic alala kakuhle ebunzini lakho (kwaye anganyibiliki phantsi njenge-anchor ye-80s yeendaba).
Ezinxulumene: Izinwele ze-Shag zezabo bonke abantu, kodwa nazi ii-Celebs ezili-14 ezirhabaxa ukujonga
Izigaba Diy Ulusu Ifashoni Yomtshato
iingcebiso ngobuhle zamehlo nemilebe
iincwadi wonke umntu kufuneka azifunde kwiminyaka engama-20
iinwele ezisikiweyo zangaphambili zeenwele ezinde
lahla iinwele zobuso ngokusisigxina
ukuphilisa njani ukulahleka kweenwele
amagama e-yoga asanas kunye nezibonelelo zazo
ezona bhanyabhanya zothando lonke ixesha